Inona avy ireo rindran-damba mety amin'ny rindrina fanorenana mahery vaika?
Ity lahatsoratra ity dia natao hanampiana anao hahatakatra ny fototry ny iray amin'ireo tetikasa fanatsarana tetik'asa maoderina indrindra amin'izao fotoana izao - fananganana rohy.
Ny lohamilina dia ilaina amin'ny famoronana asa an-tserasera. Ny webmasters sy ny mpanorina rohy dia miresaka tsy tapaka ny fomba fomba hahazoana rohy mankany anaty, ny fomba hanaovana azy ireo amin'ny fomba samihafa, ary ny fomba hahitanao ny fifandraisana an-kalalahana avo lenta - corbata roja fina. Ny zavatra dia ilaina ny mamorona ny kalitao sy ny tontolon'ny rohy biolojika misoroka ny sazy fikarohana. Mila mikarakara ny fahefana sy ny laza avy amin'ny loharanom-baovao ianao avy eo amin'ny toerana misy ny rohy misy anao satria izy dia manambara ny fitaovam-pikarohana momba ny lazanao. Ny rohy ankidinao dia mamaritra ny laharan'ny tranonkalanao, izany no mahatonga ny fanorenana rohy ho ampahany manan-danja amin'ny fampiroboroboana sy fanentanana fanentanana fanentanana.
Amin'izao fotoana izao isika dia hifantoka amin'ny endriky ny backlinks ary nahoana izy ireo no mandray anjara lehibe amin'ny fampiroboroboana ao amin'ny tranokala.
Inona àry no atao hoe backlinks?
Ny bakalava dia rohy iray avy amin'ny tranokala iray mankany amin'ny iray hafa. Misy karazana backlinks roa dofollow ary nofollow. Ireo rohy Dofollow dia ireo izay ilaintsika amin'ny rohin-tsaintsika. Ireo rohy ireo dia manana ny lanjany amin'ny loharanon'ny tranonkala mifandraika amin'ny endriny antsoina hoe "jiosy mifandraika. "Ny boot Google dia manadihady ny backlinks dofollow ary avo kokoa ny laharan'ny tranonkala iray noraisina. Tokony hapetraka ao amin'ny rohim-piraketan-tseraserao koa ny backlinks Nofollow mba hampisehoana an'i Google fa mampifandray amin'ny loharanom-baovao samihafa ianao, tsy hoe mahazo jiosy mifandray. Ireo rohy ireo dia manana marika nofollow ary tsy manome lanja ny loharano mifandraika. Tsy hita ho botsin-doka sy fitsipika izy ireo, tsy afaka ny hanaraka ny mpampiasa azy. Izy ireo dia manonona fotsiny ny marika. Na izany aza, raha manana fanalahidy mety amin'ny fanentanana fananganana rohy ianao, dia ho afaka hisolo ny backlinks nofollow miaraka amin'ny dofollow.
Nahoana ny backlinks no manara-penitra amin'ny Google?
Rehefa mamakafaka ny rohy manondro ny tranokalanao i Google dia mampifandray ny lanjan'ny tranonkala miaraka amin'ny fahefan'ny loharano ao amin'ny Internet. Google dia manintona izany ho toy ny fifidianana ho an'ny tranonkala iray. Raha toa ka avy amin'ny tranonkala malaza ny fifidianana dia mety hisy fiantraikany ratsy eo amin'ny sehatry ny tranokala sy ny mifamadika amin'izany raha toa ka tonga avy amin'ny spammy, loharanom-baovaon'ny kalitao ambany ny vato, dia hisy fiantraikany ratsy eo amin'ny tranokalanao SEO.
Amin'ny ankapobeny, ny rafitra fananganana rindran-kira tsotra dia toy izao manaraka izao: "Raha misy tranonkala iray manokana dia mijery singa iray tena sarobidy mba hampifandraisana azy, ary ity loharanon-kevitra ity dia mandanjalanja tsara sy manan-kery, tranonkala mifandraika dia tokony ho tranonkala tsara ".
Ny zavatra tokony hoeritreretinao ho an'ny paikady backlinks
Mba hamoronana profil-rohy malaza, mila mandinika ny kalitaon'ny tranonkala misy anao ianao te-hanorina rohy. Izany no antony ilainao amin'ny fanatanterahana ny fikarohana ara-tsakafo sy ny fikarohana loharanom-baovao izay manintona ny saina. Ny safidy tsara indrindra dia ny mifandray amin'ny tranokala avo PageRank sy ny bilaogy izay manan-danja amin'ny orinasanao.
Ny iray amin'ireo fomba tsara indrindra ahafahana mahazo rindran-kira dia ny famaliana ny valiny. Azonao atao ny mividy rohy mankany amin'ny tranokalanao amin'ny alàlan'ny fampidirana rohy mankany amin'ny mailakao. Indrisy anefa, maro ireo hetsika spammy manodidina ity rohy ity dia nanamboatra ny lazan'ny vahiny. Tamin'ny 2012, Google dia nametraka fanavaozana Penguin izay nanimba ny lisitry ny tranonkala izay nampiasa teknolojia fananganana spammy.
Noho izany, amin'izao androntsika izao, ny mpanorina rohy dia manoro hevitra ny hampiasana ny hany lahatsoratra organika amin'ny alalan'ny fampifandraisana avy amin'ny:
Andian-teny izay toa voajanahary ao anaty lahatsoratra ary tsy mifanaraka amin'ny teny fototra.
Fehezanteny tsy mifanohitra amin'ny anaranao.
Ny anaran'ilay lahatsoratra resahinao.
Raha tokony hanafina ny lahatsoratry ny SEO tsara kokoa ianao, dia omenao ireo mpamaky anao hahazo fampahalalana bebe kokoa mba hahafahan'izy ireo hahatakatra ny antony ilany hanarahana ny rohinao sy ny fomba ahazoany tombony amin'izany.